जर्मनीदेखि नेपालसम्म | Automotive News Nepal
जर्मनीदेखि नेपालसम्म १ असार, २०७२
गत माघ २४ गते टोयोटाको कोरोल्ला कारको टेस्ट ड्राइभको क्रममा काठमाडौंदेखि बनेपा जादै थियौ । सडकमा दुई वटा हेभी बाइक देखिए । हामीलाई चासो लाग्यो । अलि फरक देखिने बाइक भए भने जसको पनि त्यस्ता बाइकमा आखा जादो रहेछ । पछिल्लो भागमा ठुलै ब्याग जस्तो देखिने ती बाइक धनीहरु नेपाली होइनन् जस्तो लाग्यो । बाटोमा मौका मिल्यो भने उनीहरुस“ग भेटेर कुरा गर्ने सल्लाह ग¥यौ ।
बनेपा भन्दा अलि यता रहेको पम्पमा उनीहरुले पेट्रोल भरे । हामी चाहिं बनेपाको प्रहरी चौकी नजिकै उभिएर उनीहरुलाई पर्खिन थाल्यौ । प्रहरीलाई पनि यसको वारेमा बतायौं र उनीहरुलाई रोक्नका लागि अनुरोध ग¥यौ । केही समयमै ती बाइक धनी आइपुगे । हामीले उनीहरुलाई आफ्नो परिचय दियौं र नेपालको एउटा प्रतिष्ठित पत्रिका भएको र उनीहरुको कार्य हाम्रै क्षेत्रसित सम्बन्धित भएकाले केही कुराकानीका लागि अनुरोध ग¥यौ । उनीहरुले यसमा आफ्नो स्वीकृति जनाए ।
उनीहरु लोग्ने स्वास्नी रहेछन् । श्रीमान् ओलिभर र श्रीमति कोरिन्ना । ओलिभरले परिचयको क्रममा एउटा गीतको अंश पनि सुनाए ... कोरिन्ना कोरिन्ना । उनले हामीलाई प्रश्न पनि गरे – यो गीत सुन्नु भएको छ ? उनीहरु जर्मन नागरिक रहेछन् । यसरी बाइकमै घुम्न थालेको २ बर्ष भएछ । सन् २०१३ को मे देखि उनीहरु यात्रामा निस्किएका रहेछन् । उनीहरु दुवैले ६०० सिसीको यामाहा टेनेर बाइक प्रयोग गरेका छन् । उनीहरुले यो यात्राकै लागि यी बाइक किनेका हुन् । सन् १९९९ मोडलको यो बाइक जर्मनीमा उनीहरुले लगभग एक हजार डलरमा किनेका थिए । उनीहरुले लगभग ७० हजार किलोमिटर यही बाइकमा यात्रा गरिसकेका छन् । एउटा सेतो र अर्को निलो रंगको । हेर्दा हेभी नै लाग्छ । तर यात्राका लागि यो बाइक एकदमै उपयुक्त भएको उनीहरुले बताए । पेशाले ओलिभर इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियर हुन् भने कोरिन्ना डाक्टर । उनीहरु ग्रीस, टर्की, इरान, पाकिस्तान, भारत हुदै नेपाल आएका हुन् । नेपालमा उनीहरु गत बर्षको अगस्ट महिनामा प्रबेश गरेका थिए । त्यतिखेर बर्षाको समय भएकाले उनीहरु पोखरा र यसको आसपासका क्षेत्रमा धेरै दिन बिताए । जोमसोम जाने चाहना भए पनि मौसमका कारण जान सकेनन् । यद्यपि नेपालका पोखरा र अन्नपुर्ण सर्किटमा घुमेको बेग्लै सम्झना उनीहरुको मनमा ताजा रुपमा रहेको छ । यसलाई उनीहरुले जीवनकै अविष्मरणिय घटना मान्छन् ।
नेपालमै रहदा उनीहरु बीचमा केही समयका लागि जर्मनी पनि फर्के । घर परिवारको सम्झना कसलाई हुदैन र ? स्वतन्त्र रुपमा राइडिङको अनुभव लिने उद्देश्यले घरबाट निस्केको यो जोडीलाई पनि घरको सम्झना भयो नै । घरबाट पनि यसका लागि धेरै गुनासो आयो रे । त्यसैले उनीहरु नेपालमै भएको समयमा केही समयका लागि जर्मनी फर्के । जर्मनीमा गएर घर परिवार र साथीभाईस“ग रमाइलो गरे । बीचमा लगभग २ महिना उनीहरु जर्मनीमा बसे । नेपालबाट जर्मनी हवाइजहाज मार्फत जान आउन सजिलो हुने ओलिभरले बताए । त्यसैले नै उनीहरु गए र फेरि फर्केर आए । अहिले उनीहरुले फेरि बाइक मार्फत आफ्नो यात्रालाई जारी राखेका छन् । अब केही समय नेपाल बसेर २ महिना पछि जर्मनी फर्किने उनीहरुको योजना छ ।
प्रविधिको प्रयोगले पनि अहिलेको यात्रालाई सहजता प्रदान गर्छ । ओलिभरले आफ्नो हेलमेटमा गोप्रो क्यामेरा र जिपिएस राखेका छन् । जिपिएसको सहयोगले विभिन्न स्थानको बारेमा आवश्यक जानकारी लिन सकिन्छ भने क्यामेराले सडकका दृश्यलाई भिडियोका रुपमा कैद गर्छ । उनीहरुले आफ्नो वा यात्राको बारेमा जानकारी प्रदान गर्नका लागि यिकनभशयनभल।मभ नामक वेबसाइटको निर्माण पनि गरेका छन् । यसबाट उनीहरुका वारेमा आवश्यक जानकारी लिन पनि सकिन्छ ।
यात्रा गर्नु मात्र उनीहरुको उद्देश्य होइन । उनीहरुमा समाजसेवाको भावना पनि छ । पेशा नै त्यस्तै भएर पनि हुनसक्छ । उनीहरु खासगरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा केही गर्न चाहन्छन् । कोरिन्नाले खासगरी पाकिस्तान बस्दा यो क्षेत्रमा धेरै समाजसेवा गरिन् । उनले भविष्यमा नेपालमा पनि गर्न सकिने केही काम भए आफुले गर्ने कुरा हामीलाई बताइन् ।
एउटा सुन्दर र जवान जोडी । जोगी जस्तो फुक्काफाल भएर यात्रामा निस्केको जोडी । बीचमा कुनै कठिनाई पनि त आए होलान् । यद्यपि त्यस्तो ठुलै कठिनाई भने नआएको उनीहरुले बताए । बाइकमा आउने सामान्य किसिमका समस्यालाई पनि उनीहरु आफै समाधान गर्छन् । यसका लागि अघिल्लो भागमा टुल बक्स नै राखेका छन् । टायर पंचर देखि लिएर यस्तै सामान्य मर्मत आफै गर्छन् ओलिभरले ।
पेशा गतिलै भए पनि उनीहरु बीचमा दुवैले आफ्नो जागिर छोडेर आएका थिए । अब जर्मनी फर्केर फेरि आफ्नो पेशालाई निरन्तरता दिनेछन् । त्यसपछि आफ्नो पारिवारिक संसारलाई पनि अगाडि बढाउने छन् । सन्तान उत्पादन गर्नेछन् । अनि जिन्दगीको रफ्तारलाई आफ्नै गतिमा अगाडि बढाउने छन् ।
जिन्दगी एउटा यात्रा हो । यात्रा अनिश्चित हुन्छ । उनीहरु पनि अनिश्चित यात्रालाई अगाडि बढाइरहेका थिए । पनौती नजिकै बसेर गफ गर्दै स्थानीय सानो होटलको चिया खादै गफ ग¥यौ । उनीहरु पनि हामीस“ग कुराकानी गर्न पाउदा खुसी भए । अनि यात्राको सफलताको कामना गदै बिदा भयौं ।
सवारी व्यवस्थापनको नयाँ कार्ययोजना बन्दै
काठमाडौं – ट्राफिक व्यवस्थापन महाशाखाले उपत्यकामा सवारीसाधन व्यवस्थापन गर्न नयाँ...
मोटर बिमांक वृद्धिको बहस : ५ लाख कि १० लाख ?
मोटर बिमामा बिमांक वृद्धि गर्नु पर्ने बहस अहिले यातायात क्षेत्रमा छेडिएको छ । तर...
पुराना कार किन्ने हो ? मोटर कार तयार छ
काठमाडौं— कतिपय मानिसहरु गाडीका निकै सौखिन हुन्छन् र उनीहरु आफुसँग भएको गा...